“မန်ယူ” လို့ ခေါ်တာဟာ ဘာကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို စော်ကားရာ ရောက်တာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
“မန်ယူ” လို့ ခေါ်တာဟာ ဘာကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို စော်ကားရာ ရောက်တာလဲ ?
By Edi Tor September 24, 2020
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဆိုတဲ့ အမည်ကို ဘောလုံး ဝါသနာရှင်တိုင်း သိကြပါတယ်။အင်္ဂလန် ဘောလုံး လောက ရဲ့ အောင်မြင်မှု အရှိဆုံး ကလပ် အသင်းကြီး ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာပရိသတ် မြောက်များစွာ ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။ နယူတန် ဟိသ် ဆိုတဲ့ အမည်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ အမည် ပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ် ။ Man UTD, MUFC, United, Red Devils တို့တွေပါ ။ ဒါပေမယ့် Man U ( မန်ယူ ) ဆိုတဲ့ အမည် ကိုတော့ဘယ်မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်မှ မသုံးကြပါဘူး ။
ဒီအခေါ်အဝေါ်ဟာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေမသုံးကြရုံတင်မကပါဘူး၊အသင်းအပေါ်လေးစားမှု မရှိတဲ့ လုပ်ရပ် ၊ အသင်းကို စော်ကားတဲ့ အခေါ် အဝေါ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့် အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကွင်းထဲ ကို ရောက်သွား ခဲ့မယ်ဆိုရင် မန်ယူ ဆိုတာကို မပြောမိ စေဖို့ သတိပေး ပါရစေ ။
ဘာကြောင့် ( မန်ယူ ) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အပေါ် စော်ကားရာ ရောက်ခဲ့တာလဲ ?ဒါတွေအားလုံးဟာယူနိုက်တက်သမိုင်းထဲကဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာအဖြစ်တစ်ခု ကနေ စတင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါ ကတော့ မြူးနစ် လေယာဉ် ပျက်ကျမှု ပါပဲ ။
၁၉၅၀ နှစ်များမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ နည်းပြကြီး မတ်ဘတ်စ်ဘီ ရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေစိုက်ထူနေခဲ့ပါတယ်။“BusbyBabies”လို့လူသိများတဲ့မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမားတွေ ဟာ ဥရောပ ဘောလုံး လောကမှာ ကျော်ကြား နေကြပြီး အနာဂါတ် ရဲ့ ထိပ်တန်း ကစား သမားတွေ ဖြစ်လာဖို့ အရှိန်အဟုန် နဲ့ ချီတက် နေခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၁၉၅၈ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ လ၆ရက်နေ့မှာတော့ကြမ္မာဆိုးဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ယူနိုက်တက် ဟာချန်ပီယံလိဂ်(ထိုစဉ်ကဥရောပဖလား)ကွာတားဖိုင်နယ်ဒုတိယအကျော့ကိုယူဂိုဆလားဗီးယား မှာ သွားရောက် ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ရက်စတား ဘဲဂရိတ် ကို နှစ်ကျော့ပေါင်း ရလဒ်အသာနဲ့ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကာ အင်္ဂလန် ကို ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လာ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ကို စောင့်ကြို နေတဲ့ ကြမ္မာဆိုး ကိုတော့ မမြင်ခဲ့ ကြပါဘူး ။ မြူးနစ် လေဆိပ်မှာ ဆီဖြည့်အပြီးပြန်တက်လာတဲ့လေယာဉ်ဟာပြေးလမ်းချော်တိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ၊ မီဒီယာသမား၊ဂျာနယ်လစ်နဲ့သတင်းထောက်တွေ ပါဝင် ခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်း ခရီးသည် ၄၄ ဦး မှာ ၂၃ ဦး သေဆုံး ခဲ့ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား7ဦး ဟာ အခင်းဖြစ်ပွား ရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး ခဲ့ကြပြီး လူငယ်လေး ဒန်ကန် အက်ဒွပ် ကတော့ ဆေးရုံ ရောက်ပြီးမှ ကွယ်လွန် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့သမိုင်းမှာမကြုံဖူးတဲ့ကြောက်မက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးကြီး ဖြစ်ခဲ့ကာ ဘယ်တော့မှ ဦးပြန်မော့ မလာနိုင်မှာ ကို စိုးရိမ် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် နည်းပြကြီး မက်ဘတ်စ်ဘီ ( နောက်ပိုင်းတွင် ဆာမတ်စ်ဘတ်စ်ဘီ ) ဟာ အသင်းကို ပြန်လည် ဦးဆောင်ခဲ့ ပါတယ် ။ မြူးနစ် ဖြစ်ရပ်ဆိုး အပြီး ၁၀ နှစ် အကြာမှာတော့မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဥရောပ ဖလား ကို ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ အောင်မြင်မှုတွေ အတွက် ပထမဆုံး မှတ်တိုင် ကို စိုက်ထူပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာတော့ဆာဘော်ဘီချာတန်ဟာမြူးနစ်ဖြစ်ရပ်ဆိုးကနေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး ဘောလုံး သမား အဖြစ် ရှင်သန် နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးဟာယူနိုက်တက်အတွက်သာ မက ဘောလုံး လောက တစ်ခုလုံး အတွက်ပါ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ စရာ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဘောလုံးအသင်းပရိသတ်တွေဟာကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ဆိုးကွက်တွေ ကို အော်ဟစ် ပြောဆို လှောင်ပြောင် လေ့ ရှိပါတယ် ။ ဒါက ဘောလုံး ရဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ စရာ အဖြစ်ဆိုးကိုတော့ ပြောဆို လှောင်ပြောင်တာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာပါ ။
ဒါပေမယ့်ပရိသတ်အချို့ကစည်းမရှိကြပါဘူး။ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်းပရိသတ်တွေဟာယူနိုက်တက် ရဲ့ မြူးနစ် ဖြစ်ရပ်ဆိုးကို သီချင်းစာသား လုပ်ပြီး သီဆို ရာကနေ ( မန်ယူ ) ဆိုတဲ့ အမည် အစပြု လာခဲ့ ပါတော့တယ် ။
“Man U, Man U
Went on the Plane
Man U, Man U
Never came back again” ဆိုတဲ့စာသားကိုအဆိုပါအချိန်တုန်းကဝက်စ်ဘရွန်းပရိသတ်တွေဟာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့ ပွဲတွေ မှာ သီဆို ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် “Man U never intended coming home” ဆိုတဲ့ စာသား ကလည်း ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကို ဒေါသထွက် စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒိ စာသားရဲ့ အစ စာလုံး ၅ လုံးဟုMUNICHဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ကို ဖြစ်စေ လို့ပါပဲ ။
ဒါကြောင့် ( မန်ယူ ) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုစော်ကားရာ ရောက်ပြီး လူပေါင်း များစွာ သေဆုံးခဲ့ရမှု အပေါ် လှောင်ပြောင်တဲ့ အသွင် သက်ရောက်တာ ကြောင့် ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ဟာ အဆိုပါ အသုံးအနှုန်း ကို နှစ်သက် သဘောကျခြင်း မရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ အမည်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ အခြား အမည်တွေကိုလည်း ကြိုက်သလို ခေါ်လို့လည်း ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ( မန်ယူ ) ဆိုတာ ကိုတော့ ခေါ်ဖို့ မသင့်ပါဘူး . . . . .
Ref – Oh My Goal
အွန်နရီ ၊ ဟယ်ရီကိန်း တို့ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဒီညမှာ ပေါ့ဘာ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာလား ?
September 19, 2021 By Edi Tor
မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ လီဗာပူးတို့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ အဘွန်လာဟော
September 4, 2021 By Edi Tor
ရွှေတွင်းကြီးတွေ့ နေရပေမယ့် တူးမရ ဖြစ်နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
September 3, 2021 By Edi Tor
ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခု မဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကိုအံ့အားသင့်မိကြောင်း ​ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဂလင်း ဂျွန်ဆင်
ကမ္ဘာ့ဖလား နှစ်ကြိမ်ရ မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကစားသမားဟောင်းကို ခေါ်ယူနိုင်တော့မယ် အာဆင်နယ်